Somaliland: Taliyihii ciidanka Booliska Berbera oo la diley - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa goor danbe oo Salaasada maanta ah lagu diley meel ku dhaw magaalada Berbera Taliyihii gobolka Saaxil Gaashaanle Sare Cabdirisaaq Yusuf Maxamed (Caseyr)
Taliyaha markii la dilaayey waxaa la socdey ku-xigeenka Badhasaabka Gobolka Saaxil, oo isagu ka badbaadey weerarkii lagu diley Taliyaha.
Ku-xigeenka Guddoomiyaha Gobolka Saaxil ayaa saxaafadda uga waramay sida wax u dhaceen, wuxuuna sheegay in ay u baxeen meel shaqaaqo ka dhacdey, inteysan gaarin halkii ay u socdeen iyaga oo maraya meel ku dhaw Tuulada Biyaley oo Koonfur Bari uga beegan Berbera, jidgooye loo dhigtey rasaasna ooda looga qaadey.
Guddoomiye kuxigeenka Saaxil ayaa sheegay in gaadhigii ay wateen rasaas badan ay ku dhacdey, halkaasna uu ku nafwaayey Col. Cabdirisaaq, waxaana ku dhaawacmey askeri kale oo la socdey Taliyaha.
Ma jirto cid weli farta lagu fiiqey in ay ka danbeeyeen, laamaha amniga ee Booliska Somaliland ayaa xaqiijiyey dilka Sarkaalka, waxaana ay sheegeen in ay ku daba joogaan kuwii diley oo lagu tilmaamey Budh-cad Hubeysan.
Bishii Janaayo ayey ahayd markii akseri uu si badheedh ah u diley taliyihii ciidanka Birmadka ee Berbera, askerigaas oo isagana dil toogasho ah lagu fuliyey.
Daawo Ugu Yaabka Badna Iyo Waxa meshan Kadhici Dono WIilkan